I-Telia ikhetha i-ATEME ukuze i-Power yayo i-OTT i-Next Generation OTT e-Estonia - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Telia ikhetha i-ATEME kuya ku-Power yayo i-Next Generation OTT Offering e-Estonia
I-Telia ikhetha i-ATEME kuya ku-Power yayo i-Next Generation OTT Offering e-Estonia
PARIS, DENVER, SINGAPORE, SAO PAULO 06 DECEMBER, 2018 - I-ATEME, umholi ophuthumayo wezixazululo zevidiyo zokusakaza, ikhebula, i-DTH, I-IPTV ne-OTT, umemezele namuhla ukuthi iTelia Estonia, enye yezinkampani ezinkulu kakhulu zokuxhumana nge-telecommunication ezisebenza eBaltics, ikhethe Isixazululo se-TITAN sika-ATEME ukucindezela nokupakisha umnikelo wayo we-OTT wesizukulwane esilandelayo.
Le phrojekthi ihlose ukwandisa ukufinyelela HD amasevisi kulo lonke elase-Estonia futhi usungula amafomu amasha okupakisha.
I-TITAN, isixazululo esiphelele sokusabalalisa i-ATEME, senza i-Telia Estonia ikhulise umnikelo wayo we-OTT ngezinzuzo ezilandelayo:
I-Premium Video Experience: I-ATEME sika-STREAM © i-algorithms igcina ukwethembeka kokuqukethwe kumatrate amancane. Kwenza iTelia Estonia ikhulise ukufinyelela kwayo HD amaphrofayli emakhaya asekude kakhulu futhi ngcono kakhulu izinga levisi.
Ukuphakama Okuphezulu, Amandla Aphansi: TITAN, i-encoder esekelwe e-software ehlanzekile engakwazi ukugijima kunoma iyiphi i-COTS noma iseva elungisiwe, evumela i-Telia Estonia ukuba ithuthe ngokushesha iziteshi ezibukhoma eziphezulu. Nge-E3 CPU-GPU ehlanganisiwe yokucubungula amakhono amabhodi we-VCA, i-TITAN idlulisela ku-60 egcwele HD amaphrofayili nge-RU, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla kumatts ambalwa ngesiteshi ngasinye, ngenkathi kugcinwa ukuthembeka okunamandla okukhulu.
Ukusebenza komsebenzi: Kusetshenziswe nge-AMS, uhlelo oluhlelekile lwe-ATEME yokuphathwa kwezo zonke izinhlelo zokusebenza ze-TITAN, i-TITAN yenza lula ukuthunyelwa nokusebenza.
"Uma sibheka ukwandisa iziteshi zethu ezikhona ze-OTT, ukudingeka okuyinhloko kwakuyikhono lokucindezela, izidingo zokulondoloza nokuxazulula inkinga. Singasinda ekulahlekelweni okuphelele kwesayithi elilodwa futhi sibe nokushintshela okuzenzakalelayo kusayithi lokulondoloza ngaphandle kwamakhasimende ngisho nokuqaphela, "kusho u-Oliver Mändla, uMholi Weqembu le-Broadcast Solutions eTelia Estonia. "Ukukhethwa kwesisombululo se-ATEME akuhlangani nje kuphela nezidingo zethu eziphathelene nobuchwepheshe kanye nezindleko kodwa futhi kunikeza imisebenzi enembile nokubikezela, umgwaqo wokuzibophezela kanye nenqubo yokubandakanya yonke into ehlanganisiwe."
"I-Telia Estonia iyinkomba enkulu kule ndawo futhi ivuza iminyaka eminingana yokutshalwa kwemikhiqizo. Lokhu kuphumelela kubonisa ukubulawa kweqembu lethu, okuqhubeka nokujabulisa amakhasimende ethu nsuku zonke. "Kusho u-Igor Stankovic ATEME EMEA Sales Manager.
Mayelana neTelia Estonia:
I-Telia Estonia ingenye yezinkampani ezinkulu ze-IT nezethungatha ucingo kule Amazwe aseBaltic futhi ilungu Inkampani yeThelia.
I-ATEME Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Ott Umlingisi wevidiyo	2018-12-06